ဧပရယ်လ်ပူး @ ပူးတေ: July 2010
၁၉ ဂျူလိုင် မမေ့နိုင်
ကျဆုံးလေပြီးသော အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်များအား ဤနေရာမှ ရိုသေစွာ ဂါရဝပြုပါတယ်...
၆၃ ကြိမ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ကို ပူးတေဘလော့လေးမှာ မှတ်တမ်းတင်ရင်းနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အပါအဝင် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ၉ ဦးကို ရိုသေစွာ အလေးပြု ဂါရဝပေးပါရစေ...
(ဒီပုံလေးကို မေမေ့သား ဘလော့လေးမှကူးယူဖော်ပြပါတယ်ရှင်..။ ပုံလေးအတွက် ကျေးဇူးပါရှင်)
Posted by ဧပရယ်လ်ပူး@ပူးတေ at 3:13 AM 12 comments
နေ့လည်က ရုံးကနေကြွားထားတာ.... အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ လုပ်စားမယ်လို့။
ဒါလေးက မနေ့ညနေထဲက ကြက်သားရယ်... ငါးဖယ်ရယ်ကို ဆီသတ်ထားပြီး ပဲမှုန့်ကိုကျိုထားတာ...မနေ့ညနေထဲက ကြိုလုပ်ထားတာတောင် ဒီနေ့ ညနေချက်တာ ည ၈ နာရီမှ ပြီးတယ်...
ဒါက ခေါက်ဆွဲ ကြက်ဥခေါက်ဆွဲခြောက် ၁ ကီလို တထုတ်လုံးကို ဖျောလိုက်တာ... ပြီးတော့ အိုးကို မဖို့ မနိုင်တော့လို့ မစ္စတာပီကို ခေါ်ရသေးတယ်...
ဒါက အကြွပ်ကြော် ကိုယ်တိုင် ကြော်တာ ။ တအိမ်လုံးကို မွှန်ထူနေတာပဲ။ မီးဖိုချောင်က exhaust fan ကလဲ မှုတ်လိုက်မှ ပိုဆိုးနေသလား မသိဘူး။ တူးတာတူး မကျက်တာ မကျက်နဲ့။ ဒါလေးပဲ အကောင်းကျန်တယ်...အရင်တခါ နန်းကြီးသုတ်လုပ်တုန်းက အသိအစ်မတယောက် လာကြော်ပေးသွားတာ…သူကြော်တုန်းက ဘာသံမှ မကြားရဘူး....ပထမအကြိမ်ကြော်တာပဲ.. ဒီလောက်တော့ ရှိမှာပေါ့နော်...:D အမှန်ပြောရရင် ပူးတေက ဒီအကြော်ကို လုံးဝမကြိုက်ဘူး...ပဲသွေး(ဘဲသွေး)လေး ရှိရင်ကောင်းမှာ...ပူးတေအရမ်းကြိုက်....
နံနံပင်၊ ကြက်သွန်စိမ်း၊ သံပုရာသီး။ နံနံပင်က မနေ့ကထဲက ကြိုဝယ်ထားတော့ နဲနဲနွမ်းနေပြီ…ဒီနေ့မှ ဝယ်မယ်ဆိုလဲ သူက အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲထဲ ပါခွင့်ရတော့မှာ မဟုတ်ဘူးလေ...
ပွက်ပွက်ဆူနေတုန်းက အရောင်လုံးဝမရှိဘူလေ… ဒါမျိုး ဖြူနေတာ… အုန်းနို့များသွားတယ်ထင်တယ်.. ကိစ္စမရှိဘူး… များပစေ ကောင်းတယ် ...မနက်ဖြန် အဝအိပ်လို့ရတယ်..း)
နောက်တော့ ဒါမျိုးလေး ဆီသတ်ထားတဲ့ အရောင်လေးတက်လာတယ်….
ဒါက စားဖို့အတွက် ပန်းကန်ထဲထည့်တော့ အရောင်က ဒီလောက်ပဲ ထွက်တော့တယ်...
ဒါက ယောက်မ (မစ္စတာပီ ညီမ) ယူလာပေးတဲ့ ငါးဖယ်ကြော်လေး
ရှုစား သုံးဆောင်လို့ ရပါပြီ....
သူငယ်ချင်းဒေါ်ပွင့်(မြူးမြူး) လေ လာမယ်ဆိုပြီး ပုံပြောသွားတယ်... ၁၀ နာရီလောက်ထိ စောင့်နေသေးတာနော်... ခုနလေးကမှ ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်လိုက်တယ်... မနက်ကျရင် breakfast တီးချင်ရင်ရသေးတယ်... ဆောဆောထလာခဲ့ မှီသေးတယ်နော်...
Posted by ဧပရယ်လ်ပူး@ပူးတေ at 12:36 AM 25 comments
Friday Mood နဲ့ ငယ်ငယ်တုန်းက သီချင်းများ
ဒီနေ့ Friday Mood ဝင်နေလို့ ဟိုဟိုဒီဒီ လျောက်သွားလည်တယ်...ရုံးမတက်ဘူးလားလို့ အထင်မဆောပါနဲ့ဦး....ရုံးတက်ပြီး ရုံးကနေ သူများအိမ်တွေ လျောက်လည်နေတာပါ...ကိုယ်လုပ်စရာတွေကလဲ မနေ့ကပဲ အသည်းအသန်လေ.... နာရီတဝက်နောက်ကျပြန်ပြီး အကုန်လုပ်ပေးလိုက်တယ်... မန်နေဂျာလဲ သောကြာနေ့ဆိုရင် တော်တော်တန်ရုံ အရေးမကြီးရင် Friday Mood ဝင်လေ့ရှိတယ်... ဒါကြောင့် သူဒီနေ့ ပူးတေကို ခိုင်းဖို့ စိတ်ကူးမရသေးဘူးဖြစ်မယ်..... Monday မှသာ သေဖို့သာပြင်....;(
အဲလို ဟိုဟိုဒီဒီ လျောက်လည်ရင်းနဲ့ ဒီနေရာလေးကို ရောက်သွားတယ်... သူရေးထားတာလေးတွေ ဖတ်လို့ကောင်းတယ်..စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်....ကွန်မန့်တော့ မပေးဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ... ကိုယ်က သောကြာမုဒ်ဝင်နေတာကိုး... စာမရိုက်ချင်ဘူးးး..ပြီးရင်တော့ ထပ်သွားဦးမှာပါ... သူ့မှာ ပူးတေစိတ်ဝင်စားတဲ့ Article လေးတွေ ရှိတယ်....အဲဒီမှာ ဒီပို့စ်လေး ကိုရောက်သွားတော့ အိုက်ပူဆိုပြီးသွားတွေ့တော့ ဘာပါလိမ့် အိုက်ပူပေါ့... ဖတ်လိုက်တော့ သဘောပေါက်သွားတယ်...မောင်သူရသီချင်းလေး...
ဒီသီချင်းက မရှိဘူးဆို အနှစ် ၄၀ လောက်ရှိနေပြီလို့ ပူးတေထင်တယ်(ဒီထက်လဲ ကြာချင်ကြာနိုင်မယ်ထင်တယ်)....မေမေ့ညီမ အဒေါ်နံပါတ် ၈အဒေါ် ၃ တန်းနှစ်လောက်တုန်းက ၈ နှစ် ၉ နှစ်သမီးလောက်ကတည်းက ဒီသီချင်းနဲ့ သူက ကျောင်းကပွဲတွေ ရပ်ကွက်က လုပ်တဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့တို့ ပြည်ထောင်စုနေ့တို့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ ကပွဲတွေမှာ ကခဲ့တယ်လို့ မေမေတို့ အဒေါ်တို့ ပြောပြလို့ သိရတယ်... ပူးတေတို့ကို မွေးတဲ့အချိန်ကျတော့ အဲဒီအဒေါ်က B.Com တောင် ပြီးနေပြီ...ပူးတေတို့ ကလေးတွေကို အဖွားကလဲ ဒီသီချင်းနဲ့ပဲ၊ မေမေဆိုလဲ ဒီသီချင်း၊ အဒေါ်တွေဆိုလဲ ဒီသီချင်းပဲ...ငယ်ငယ်ထဲက နားယဉ်နေခဲ့တယ်.. အဲဒီအဒေါ်တွေ အိမ်ထောင်ကျပြီး ကလေးတွေမွေးတော့လဲ ဒီသီချင်းနဲ့ပဲ ချော့သိပ်ခဲ့ကြတာ...အခု ပူးတေတို့ မောင်နှမဝမ်းကွဲတွေထဲက ကလေးတွေမွေးတော့ ချော့သိပ်တော့လဲ ဒီသီချင်းပဲ....အခုဆိုရင် အဲဒီအဒေါ်က အသက် ၄၉ နှစ် ၅၀ လောက်ရှိနေပြီ....
အဒေါ်ငယ်ငယ်လေးထဲက ကျောင်းကပွဲတွေမှာဆိုတဲ့ သီချင်း၊
ပြီးတော့ နောက်မျိုးဆက် ဖြစ်တဲ့ အဒေါ်ရဲ့ သားသမီးတွေ အပါအဝင် ပူးတေတို့ မောင်နှမဝမ်းကွဲတွေ လက်ထက် အိပ်ယာဝင်သီချင်း၊
အဒေါ်ရဲ့ တူတွေ တူမတွေရဲ့ သားသမီးတွေ (မြေးတူ/ မြေးတူမတွေ) ၊ ပူးတေတို့ရဲ့ နောက်မျိုးဆက်တွေ လက်ထက်အထိလဲ (ခုထိ) ဒီသီချင်းလေးပဲ....
မောင်သူရ နေသတဲ့ ♫ ..♫
ရှမ်းရော ချင်း ကချင်
ရခိုင် ကရင် မွန် ကယား
မေမေ(ဖေဖေ) ပြောတာ မှတ်ပါလေး
ငယ်ငယ်တုန်းက အိပ်ယာဝင်တေးလေးလို့ အမှတ်တရအနေနဲ့ ပူးတေလဲ မှတ်မိသလောက်လေး စာသားလေးတွေ ချရေးထားတာ.... အလှတရား ရဲ့ ပို့စ်မှာ စာရေးဆရာရေးထားတာက အိုက်ပူတဲ့ ပူးတေတို့ တအိမ်လုံးကတော့ အိုက်ခွန် တဲ့... ပူးတေတို့အိမ်ကလူကြီးတွေ မှားနေတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်... သိတဲ့လူရှိရင်လဲ ပြောပြသွားလို့ ရပါတယ်... ချင်းလေးနံမယ်ကလဲ ရမ်ဘူလား ရမ်ဘိုလားမသိဘူး...း) ရမ်ဘိုဆိုရင်တော့ ချင်းလေးမဖြစ်ပဲ ဟောလီးဝုဒ်မင်းသား ဖြစ်သွားတော့မှပဲ.. ဒွတ်ခ
နောက်တခုက ရေဒီယိုက မနက်ခင်းလာတဲ့ သီချင်းလေးနဲ့ အိမ်ကလူကြီးတွေက ကလေးတွေကို နှိုးလေ့ရှိသေးတယ်...သီချင်းလေးက
မထသေးသော သူသည် ပျင်းရိသူဖြစ်သည်
နောက် ပူးတေငယ်ငယ်က အိပ်ယာကနေနိုးရင် စိတ်ကောက်တတ်တယ်၊ ဂျီကျတတ်သေးတယ်။ ... ဒါကြောင့် မနက် မိုးလင်း အိပ်ယာကနိုးရင် အရပ် ၁၀မျက်နှာ မေတ္တာပို့တို့..ဒဂုံဦးထွန်းမြင့်ရဲ့ ၃၈ ဖြာ မင်္ဂလာ ကဗျာလေးလေးတွေကို ရွတ်ရတယ်...ပါးစပ်က ဆိုလိုက်တာရော နားထောင်လိုက်တာရော ပေါင်းလိုက်တော့ စိတ်က ကြည်သွားရော...ပူးတေက မနက်ပိုင်းကို ကောက်ညှင်းပေါင်း အဖြူရောင်ပဲများများနဲ့ကို နွားနို့နဲ့ စိမ်ပြီးစားရတာ ကြိုက်တယ်.... အဲဒါကြောင့် ငယ်ငယ်ကဆို ပူးတေက ချစ်တီး ခဏခဏဖြစ်တယ်... ဒါကြောင့် အိမ်က ကောက်ညှင်းပေါင်း မကျွေးဘူး... ဒီနေ့ ကောက်ညှင်းပေါင်းသည် မထွက်ဘူး.. ဒီနေ့ ကောက်ညှင်းပေါင်းသည် ဈေးဗန်း မှောက်ကျသွားလို့ ဘယ်သူမှမဝယ်လိုက်ရဘူးလို့နဲ့ ညာပြောလေ့ရှိတယ်...ဒါဆို အာပြဲနဲ့ငိုပြီ....ပူးတေတို့အိမ်မှာ နံပြားဖုတ်တဲ့ ကရင်ဦးလေးကြီးက သူတို့အိမ်မှာ ကောက်ညှင်းပေါင်းရှိတယ်။ အိမ်လိုက်ခဲ့ရင် ကျွေးမယ်ဆို အငိုတိတ်တယ်..သူခေါ်သွားမှာဆိုးလို့လေ... ငယ်ငယ်ကဆိုရင် ဆိုးရင် အဲဒီဦးလေးကြီးအိမ်ကို အပြီးပေးပစ်လိုက်တော့ မယ်ဆိုရင် ဆိုးနေတာ ဂျီကျနေတာတွေ ချက်ချင်းရပ်တယ်...:)
နောက်တခုက စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ နေ့သစ်သီချင်း...ပူးတေကို အိပ်ယာထရင် စိတ်ကြည်ကြည်လင်လင်ရှိအောင် ဦးလေးအလတ်က ဂစ်တာတီးပြီးဆိုပြခဲ့တာ... ဦးလေးအလတ်က အဲဒီခေတ် ဆံပင်ဂုတ်ထောက်နဲ့ ဂစ်တာတလက်နဲ့ ပူးတေတို့ရဲ့ ပင်တိုင်အဆိုတော်... မေမြို့မိုးတို့၊ မန္တလေးရောက် ရှမ်းတယောက်တို့ ဆိုပြနေကျ.... ဒါပေမယ့် နေ့သစ်သီချင်းလေးကိုတော့ သူက မနက်အိပ်ယာနိုးရင် ဆိုပြလေ့ရှိတယ်...စာသားလေးတွေက အရမ်းထိမိတယ်...
♫ အရှေ့ဆီမှာ ရောင်နီလေး သန်းလို့လာပြီ
အချိန်ဆိုတာ လူကိုမစောင့်ဘူး လေကွယ်
♫ ကိုယ်လက်ကို သန့်ရှင်းထား...
တို့ကို မျှော်လင့်ခြင်းအသစ်တွေပေးလာမယ် …
♫ ငှက်တောင်မှ သာယာတဲ့သီချင်း ရွေးတတ်တာပဲ
ကမ္ဘာမြေအတွက် မင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်ဝယ် …
♫ လေကောင်းတွေ ရှူရှိုက်ကြ
တို့ကို အင်နဲ့အားအသစ်တွေ ပေးလာမယ် …
♫ ညအမှောင်ရယ် အိပ်မက်ဆိုးက နိုးလာပြီ
ပြင်ဆင်ဖို့လိုတဲ့ အခွင့်ကောင်းပါပဲ …
♫ ရန်ငြိုးတွေ ဖြေဖျောက်စို့
တို့ကို အောင်မြင်မှုအသစ်တွေ ပေးလာမယ် …♫ ♫ ♫
အဲဒီသီချင်းက အခု မစ္စတာပီနဲ့ လက်ထပ်ပြီးတော့ သူကနေရအောက်ကျက်ပြီးတော့ ပူးတေကို အလုပ်ကနေ ဖုန်းဆက်ပြီး အိပ်ယာကနှိုးတဲ့ သီချင်း (သူက မနက် ၆နာရီခွဲ ဆို အိမ်က ထွက်သွားတယ်လေ...၇ နာရီခွဲရင် ဖုန်းနဲ့ ဒီသီချင်းဆိုပြီး လှမ်းနှိုးတယ်။) ပူးတေရဲ့ phone alarm ထဲမှာလဲ ဒီသီချင်းလေးပဲ ထည့်ထားတယ်... ငယ်ငယ်က သတိရစရာလေးတွေကို အမှတ်တရ အနေနဲ့... နောက်မျိုးဆက်ထိ လက်ဆင့်ကမ်းခွင့်ရရင် ကမ်းချင်နေသေးတာလေ....ငယ်ဘဝ အမှတ်တရလေးတွေပေါ့
စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ နေ့သစ်သီချင်းလေးကို ဒီနေရာမှာ နားထောင်လို့ရပါတယ်...ကျန်တဲ့ သီချင်းတွေကတော့ Youtube မှာ မရှိလောက်ဖူးထင်တယ်နော် ...သိတဲ့လူရှိရင် ပြောပြသွားပေးပါနော်...
ဒီညနေ အိမ်မှာ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ ချက်စားပါမည့် အကြောင်းကိုလဲ Breaking News အနေနဲ့ ကြေငြာရင်း အိမ်နီးသူများ လာရောက်သုံးဆောင်နိုင်ကြပါတယ်လို့....အိမ်မနီးသော ဘလော့ဂါ အစ်ကို အစ်မ သူငယ်ချင်းများကိုတော့ ဘလော့ပေါ်မှာပဲ နတ်များက အနံ့စားပြီး ဘလော့ဂါများက ထုံးစံအတိုင်း ဓါတ်ပုံမှတဆင့် ရှုစားနိုင်ရန် တင်ပြပေးသွားပါမည်လို့ ကြွားလိုက်ပါကြောင်း.... Dan tan tann.....
Posted by ဧပရယ်လ်ပူး@ပူးတေ at 3:05 PM 12 comments
" me too, ha ha "
ဖောဝပ်အီးမေးလ်လေးကို သဘောကျလို့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်....
ပုံတွေကို မမြင်ရတဲ့ နေရာက စာဖတ်သူတွေအတွက် ပုံထဲက စာသားလေးတွေကို ပြန်ရိုက်ပေးလိုက်ပါတယ်...
English is difficult language .... for some!
This isatrue story from the Japanese Embassy in US. ( ဒါကတော့ စာထဲမှာပါတဲ့ အတိုင်းရိုက်လိုက်တာပါ။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဘူး)
A few days ago, Prime Minister Mori was given some Basic English Conversation training beforre he visits Washington and meets president Barack Obama.
The instructor told Mori Prime Minister , when you shake hands with President Obama, please say, " How are you?" . Then, Mr Obama should say, " I am fine, and you?" Now you should say, " me too". Afterward we, translators, will do the work for you. It looks quite simple.
When Mori met Obama,
he mistakenly said, " who are you?" ( Instead of "How are you?" )
Mr Obama wasabit shocked but still managed to react with humor.
"Well, I'm Michelle's husband, ha ha..."
Then Mori replied, " me too, ha ha" .
အိုဘားမားတော့ သူနဲ့တွေ့မှ ဘလိုင်းကြီး အကစ်ခံလိုက်ရတယ်နော်.... :)
Forward Mail က ရတာပါ... တကယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့ ပူးတေလဲ မတိဘူး...ha ha..
Posted by ဧပရယ်လ်ပူး@ပူးတေ at 11:53 AM 14 comments
Labels: မျှဝေခြင်း, ရီစရာ